Medjugorje: Mee 27, 2020 Nwanyị anyị na-agwa gị okwu, ozi enyere Mirjana | EKPERE NA OZI
Medjugorje: Mee 27, 2020 Nwanyị nwanyị na-agwa gị okwu, ozi enyere Mirjana
Paolo Tescione	Edere ya Maggio 27, 2020 Maggio 27, 2020
Umu nnem! Taa obi m jupụtara n'ọ joyụ. Aga m achọ ka ị chọta onwe gị n’ekpere kwa ụbọchị dịka taa, nnukwu ụbọchị ekpere. Naanị site n’ekpere ka ọ happinessụ nke na-emezu mkpụrụ obi na ahụ. Na kpomkwem na nke a, mụ onwe m bụ nne chọrọ inyere unu niile aka. Ka m mee ya! A sị m gị ọzọ: meghee obi gị niile! Ka m duzie gị: myzọ m na-eduga na Chineke.A na-akpọ gị òkù ka ị na-ekpekọ ekpere ọnụ, n'ihi na ị hụrụ nke ọma na ejiri ekpere anyị bibie ihe ọjọọ niile. Ka anyi kpee ekpere ma nwee olile anya.
br> Ezi ihe bu ekpere bu na ibu onu na inye onyinye ebere n’ekpe ikpe ziri ezi. Ọ di nma kari onye ntà n’ekpe Ọ dị mma inye onyinye karịa inyepụ edo edo. Ging bido zoputa onwu ma sachapu nmehie nile. Ndi n’enye onyinye g’enwe ndu ogologo ndu. Ndị na-eme mmehie na ikpe na-ezighi ezi bụ ndị iro nke ndụ ha. Achọrọ m igosi gị eziokwu niile, na - ezochighi ihe ọ bụla: akụziworo m gị na ọ dị mma ikpuchi ihe nzuzo eze, ebe ọ dị ebube ikpughere ọrụ nile nke Chineke. gbaa nti n’ekpere gị tupu otuto nke Onye-nwe. Yabụ mgbe ị liri ndị nwụrụ anwụ.
Onye-nwe-ayi akwatuwo ulo ndi-npako, Ọ n makesme kwa ka ókè-ala nwanyi di-ya guzosie ike. Ihe-árú n'anya Jehova ka èchìchè ọjọ bu: Ma okwu nkpuru-obi-ọma nānya isi. Onye ọ bula nke nkpuru-obi-ya n forweta akpukpọ-ya b upsagọrọ ab ;agọ; ma onye ọ bụla kpọrọ onyinye asị ga-adị ndụ. Obi onye ezi omume na-atụgharị uche tupu ọ zaa, ọnụ onye ajọ omume na-ekwupụta ajọ omume. + Jehova nọ ndị ajọ omume n'ebe dị anya, ma ọ na -ege ntị n'ekpere ndị ezi omume. Ihe nchapu anya n’enye obi uto; ozi obi uto na - akpọlite ​​ọkpụkpụ. Ntị nke na-anụ ịba mba ga-eme ka ụlọ ya dịrị n'etiti ndị maara ihe. Onye nāju idọ-aka-na-nti jụrụ onwe-ya: Onye n listge nti iba-nba g thenwe uche. Egwu Chineke bu akwukwo amam-ihe, tupu otuto adi ala.
Nke gara aga Post Gara aga post:Kedụ ihe ọ pụtara nye Chọọchị na Pope enweghị atụ?
Next Post → Post ozo:Nraranye nke ebe obibi ndu na ekpere nke Jisos kpere